Europe ane UNESCO World Heritage nzvimbo zvinokwezva mamiriyoni vashanyi. Pane dzakasiyana-siyana zvinotyisa kuona - kubva pakuvaka uye kwetsika zviyeuchidzo kune zvakasikwa zvishamiso zveOkare Continent.
With munzvimbo dzakawanda saka kusarudza kubva, zvingatiomera kuti mufambi kuti chisarudzo chokuita kwainoenda. Kuti akubatsire kusarudza UNESCO World Heritage nzvimbo Europe kutanga kuona, isu takanyora pfupi:
Vamwe zvikuru chinozikamwa UNESCO World Heritage nzvimbo muFrance zvinosanganisira zvishamiso zvakafanana Versailles. Iyo ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye inopenya imba yekugara mu Furanzi. Imwe nzvimbo yakanaka kutaura ndiro Abbey Church Saint-Savin-sur-Gartempe. Zviri chechi Romanesque kubvira muzana remakore rechi9 muna Poitou, Aquitania itsva.
Italy rizere UNESCO World Heritage zvepaIndaneti, saka isu tichati kutaura zvimwe inonyatsozivikanwa kupfuura vaya. Yedu yekutanga kumira ndiyo matongo nzvimbo Pompei, Herculaneum, naTorre Annunziata. kukosha kwavo iri yokuti ndivo Zvisaririra vekare maguta vakavigwa kuputika Mt. reVesuvius mu 79 AD. Panewo Castel del Monte, yamambo chomuzana remakore rechi13. Sezvo mixes zvinogona kuitwa EuropEAN Cistercian Gothic uye Muslim akitekicha, zvinonakidza munhu pamberi.
Germany ndiyo nyika nematende, machechi, uye zvimwe zvinoshamisa UNESCO World Heritage zvepaIndaneti. Aachen Cathedral is the burial place of Charlemagne and the first-built vaulted structure since antiquity. The inonyanya kuzivikanwa chiratidzo kuGermany kune imwe kereke huru, ichi mumwe Cologne. Zvakatora emakore kuvaka kubvira 1248. Uyezve, miganhu yehumambo hweRoma zvakare yakakosha kushanya. Munhu wose anofanira kuona Hadrian Wall uye Antonine Wall, izvo dzakavakwa 122 AD uye 142 AD, zvichienderana zvakadaro.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano:https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funesco-world-heritage-sites-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)